Isitudiyo esisogwini lweLake Lacanau (le moutchic) - I-Airbnb
Isitudiyo esisogwini lweLake Lacanau (le moutchic)
Lacanau, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Loïc
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Loïc izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Isitudiyo esincane, esihle esingu-21m2, esihlomele ngokuphelele abantu abangu-2, ogwini lweLake Lacanau (ibhishi eliqhele ngamamitha angu-20, ithala elinokubukwa). Itholakala esitezi esiphansi esakhiweni esincane esinezindlu ezi-4, indawo yethu yokuhlala isesitezi sokuqala.
I-Le Moutchic itholakala ku-6 km ukusuka e-Lacanau Ville (hypermarket) kanye ne-6 km ukusuka e-Lacanau Océan (amabhishi, izindawo zokudlela, amabha nama-nightclub, zonke izitolo).
Ikhishi lifakwe 3 hobs ceramic, microwave, ifriji, umenzi wekhofi, kanye nenqwaba yokugcina. Ezinye izidingo eziyisisekelo zishiywe: usawoti / pepper, amafutha / uviniga, lwesinaphi, kanye nemikhiqizo yokuhlanza nezipontshi.
Igumbi lokuhlala elinombhede wohlobo lwe- "B-Z", indawo yokubeka,
Igumbi lokugezela eline-WC.
SICELA UQAPHELE: ilineni alinikeziwe. Udinga ukuletha ishidi elifakiwe, okungenzeka ishidi eliyisicaba, isembozo se-duvet kanye nama-pillowcase. Kanye nelineni lakho lelineni lokugezela kanye namathawula wetiye, ungawaqasha wonke esizeni.
Kukuba abahambi ukuthi benze ukuhlanza ekupheleni kokuhlala kwabo. Konke okudingayo kusendaweni (umshanelo, i-mop kanye nemikhiqizo ehlukahlukene).
4.63 out of 5 stars from 344 reviews
4.63 · 344 okushiwo abanye
Izindlela zamabhayisikili nokuqashwa kwamabhayisikili ngaphansi kwamamitha angu-50 ukusuka esiteshini.
Ibhishi elinesihlabathi esingaphambi kwestudiyo, utshani buqamamana nje, indawo yokudlela, indawo yokudlela kanye ne-pizzeria (evulekile "ngesizini": izimpelaviki kusukela ngamaholide kaFebhuwari, bese kusuka ngamaholide ePhasika) amamitha angama-50.
Iyatholakala uma kudingeka!
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$420.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lacanau namaphethelo